Ciidanka nabad-sugidda oo gacanta ku dhigay laba nin oo fal Shabaabnimo ah lala xiriirnaayo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka nabad-sugidda oo gacanta ku dhigay laba nin oo fal Shabaabnimo ah lala xiriirnaayo
Howlgal culus oo ay ciidamada nabad-sugidda qaranka habeenkii xalay ka sameeyeen degmada Dharkenley ee magaalada Muqdisho ayaa sida la sheegay lagu soo qab-qabtay labo nin oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab.
Ciidanka nabad-sugidda oo mudooyinkii ugu dambeysay howlgalo aan caadi ahayn lasoo baxay ayaa xaafadda Dabakaayo Madow ee ku taala degmada Dharkenley, waxay ku qabteen labadaasi nin oo lagu tuhunsan yahay inay Al-shabaab katirsan yihiin islamarkaana ay yihiin dadka amaan-daridda ka waday degmadaas.
Afhayeenka wasaarada amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Kaamil Macalin Shukri oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labadaas nin ee laga qabtay agagaarka Dabakaayo Madow ee degmada Dharkenley ay haatan ku jiraan gacanta ciidamada nabad-sugidda Soomaaliya islamarkaana baaritaan lagu sameyn doono.
“Ciidamada nabad-sugidda waxay habeenkii xalay degmada Dharkenley kasoo qabteen laba nin oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab, gacanta ciidanka ayey haatan ku jiraan walina baaritaano ayaa ku socda arrintooda” Sidaas waxaa yiri afhayeenka wasaarada amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Kaamil Macalin Shukri.
Si kastaba ha ahaatee, degmada Dharkenley ayaa ka mid ah degmooyinka ugu halista badan ee ku yaala magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ka dhacaan dilalka qorsheysan, waxaana inta badan baxsada ragga ka dambeeya dilalkaas, inkastoo bulshada gobolka banaadir ay mudooyinkii ugu dambeysay si weyn ula shaqeynayeen ciidamada amniga sidii loo soo qaban lahaa nimanka xilli kasta dhibaateeya shacabka Soomaaliyeed.